Qiimeen lasameeyay ayaa lagu ogaday in MW Farmaajo uu yahay qof aan balan laheen - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Qiimeen lasameeyay ayaa lagu ogaday in MW Farmaajo uu yahay qof aan...
Qiimeen lasameeyay ayaa lagu ogaday in MW Farmaajo uu yahay qof aan balan laheen
Qiimeen aysameysay Muqdisho Online ayeey ku ogaatay in tageeradii uu kulaha Madaxweyne Farmaajo shacabka soomaaliyeed uu jiro hoos udhac xad dhaaf ah kadib markii uula soo baxay waji cusub waixii kadanbeeyay goortii xilka lagu wareejiyay.
Madaxweyne Farmaajo oo markiisi hore lagu bartay qof aad usoo jiita shacabka soomaaliyeed asagoo isticmaala erayada kamuuqata wadaniyada & waxyaabaha ku weyn quluubta muwaadiniinta balse markii uu talada lawareegay lasoo baxay habdhaqan naxdin leh dadka qaarkiis aykala saari waayeen inuu yahay jaajuus shisheeye & inuu yahay qof sixran oo caafimaad qabin.
Balan Qaadyadii uu sameeyay xiligi ololaha doorashada MW Farmaajo .
in uu kashaqeynaayo Amniga sido kale inuu xoojinayo dhismaha tayeeyna ciidanka sirdoonka asagoo u qoondeeyay bishii in xuuraanka kaliya uu ku bixiyo 1 Milyan oo doolar.
inuu dhisaayo adeegyada bulshada , sida waxbarashada , caafimaadka , korontada & biyaha.
in uu waxsoo saarka dalka sida beeraha , warshadaha & kaluunka uu xoojin doono si wax looga qabto sicirka Qutul daruuriga oo aad usareeyo maadama bulshada inta ugu badan noloshooda ay adagtahay oo sadaxda waqti si toos uma helaan wax ay cunaan.
in uu ladagaalamayo qabyaalada & kutagri falka awooda dowlada sifo aan sharci aheyn.
in uu Madaxweyne bas noqon doonin oo uu nabadoon ahaan doono inta uu Madaxweynaha JFS yahay.
in uu Magdhaw siin doono goobaha gaarka looleeyahay ee ku burbura qaraxyada.
in uu jiri doonin wadooyin looxiro goorta uu safraayo ama booqano gooba kamid ah caasimada .
Qodobadaas & kuwo kale oo badan kuwaaso dhamaan ah rabitaanka shacabka isla markaasna uu xiligii ololaha farmaajo balan qaaday balse aan waxba ka fulinin .
Madaxweyne Farmaajo markii uu xilka qabtay 2017 wixii uu la yimid.
Habacsanaan weyn oo ka jiraa dhinaca Amniga Qaraxyadii ugu dhimashada badnaa taariikhda Soomaaliya waxeey dhaceen inta lagu guda jiray mudo xileedka MW Farmaajo, sido kale tayeenta sirdoonka soomaaliya uu balan qaaday, waxaa lakala diran dhamaan Sirdoonkii kashaqeynayay NISA , wuxuu qaatay dhalinyaro xoogaga wadaniyiinta kuwaaso uu kadhigtay Sirdoonka cusub ee uu dhistay nasiib xumo sirdoonkaas waxeey ilaashan waayeen Sirtii ugu weyneed ee Qaranka uu lahaa taaso ah Xogaha Saraakiisha , Saraakiil xigeenada , askarta & adeegayashaa u diiwaangashan NISA taaso kadhigan maanta oo idinla hadlaayo inuusan jirin sirdoon dowlada soomaaliyeed si qarsoodi ugu shaqeeyo. lacagti xuuraanka 1 Malyin uu balan qaadayna xogaha lagu maalgaliyo waa kuwa siyaasiinta ka aragtida duwan ee Dowlada sida xisbiyada mucaaradka, inta uu jiray Madaxweyne Farmaajo maalina lalama xisaabtamin Taliyayaasha ciidamada fashilka wayn ee Amni oo jiray balse dano siyaasadeed owgeed ayaa dhowr jeer isbadal loogu sameeyay taliska ciidamada.
Madaxweyne Farmaajo intuu dalka joogay ma uusan dhisin Cisbitaal & Goob waxbarasho iska day inuu qiima dhimis ku sameeyo qiimaha korontada & biyaha oo bulshada baahi wayn u qabto balse cisbitaaladii uu dhisay Madaxweyne Hassan Shiekh ayuu rinjiga darbiyada ka badalay sariirona uu kusoo kordhiy .
wuxuu curyaamiyay guud ahaan ganacsigii dalka oo laga dareemayay hoos udhac xoogan kahor inta uusan xilka lawareegin, wuxuu xirtay wadooyinka soogala Muqdisho kuwaaso ganacsata ku adkaatay soo galida beedacada suuqyada , wuxuu canshuur xogan kusoo rogay guud ahaan ganacsiga dalka , waxaa korodhay isbaarooyinka ayla kulmayaan beeraladeeda , sido kale wuxuu shirkado shiinees siiyay hishiisyo ayku xaalufinayaan kaluunka bada soomaaliya ku jira halka kaluumeysatada soomaaliyeed ay lakulmaan xarig joogta & burburin doomahooda aykala kulmaan ciidamada shisheeye ee kusugan biyaha soomaaliya. arrinta ugu yaabka badan ayaa noqotay in gacansatada ajaaniibta ayku dhiiran yihiin in ay warshado ka furtaan soomaaliya sababo maamul xumo ee Madaxweyne Farmaajo.
inta uu talada haayay madaxweyne Farmaajo ayaa qabyaalada gaartay heerki ugu sareeyay iyadoo safaaradaha soomaaliya ku leedahay caalamka shaqaalo & diblumaasiyiin looga dhigay qabiilka daarood oo uu ka dhashay gaar ahaan mareexan sido kale xafiisyada ugu samenta badan dalkana wuxuu udhiibay wiilal beeshiisa ah, Madaxweyne Farmaajo maamulkiisa ayaa lagu qiimeeyay in ay tahay mida isticmaasha awooda dowladnimada sifo aan sharci aheyn , Madaxweynaha wuxuu dalka ku maamula digreeto & rabitaankiisa shaqsiga asagoo marar badan ku tuntay sharuucda dalka sida dastuurka, waxaana udanbeeysay sida loo ceeriyay Hassan Ali Khayre.
Madaxweyne Farmaajo asagoo laga sugaayo in uu dib u hishiiisiinta dalka uu sare u qaado ayuu noqday qof asaga abuura colaada , sida isku dirka beelaha , duminta dowlad goboleedyada , weerarka siyaasiinta ka aragti duwan & fulinta dilal qorsheysan oo sharciga ka fog .
balan qaadkii Madaxweynaha inuu magdhaw siinayo dadka guryahooda qaraxyada ku dumaan iska daaye inu magdhaw siiyo waxeey dhib ku qabaan ineey dadka ayaga dhistaan guryahooda maadama baaburkii carada , jaayga , Nuuryada & Qalabka dhismaha keeni lahaa looma ogola si caadi inuu ugu shaqeeysto muqdisho waxaa suura gal ah in 1 kii baabur ee nuuryada soo galiya Muqdisho ku qaadato 8 saac waliba asagoo laga qaaadayo lacago baad ah oo lasiiyo ciidanka jagbooyntiyada.
Madaxweyne Farmaajo mamulkiisa wuxuu dhagxaan ku xiran laamiyada waaweyn & kuwa yaryar, Jidcadayaasha & luuqmanka , arrintaas oo ah culees wayn dadkana gaarsiisay in dumarka ku dhalaan jidadka qaraxana uu wali sii socdo.
Haddaba waxaa bulshada u cadaatay in Madaxweyne Farmaajo yahay shaqsiga ugu beenta badan ee soomara madaxtooyada Soomaaliya , asagoo goaamankiisa u arkaa mida ku jirta maslaxada dalka , sido kale marnaba ma qaato talooyinka aysiinayan dadka waxgaradka .
Awooda Ciidamada Dowlada & Ciidamo shisheeye ayuu u isticmaalay banaanbixii baydhabo wuxuuna ku dilay 11 qofood oo rayid, sido kale awooda ciidama ayuu u adeegsaday dhamaan siyaasiinta kasoo horjeeda aragtidiisa uu dalka ku maamulaayo.
Dhaqaalaha dowlada oo lagu jaangooyay rabitaanka Madaxweynaha iyadoo malaayiin dollar lagu bixiyo xaaran ku naxayaasha dagan hotelada qaaaliga kuwaaso ay ugu horeeyan Salaad Ali Jeelle & Ali Wajiis IWM kuwaaso 10 Kun dolar kaash ah lasiiyo sido kale laga bixiyo hoteelada ay dagan yihiin , dhaqalahaas oo hadii arrimaha hormarinta beeraha looleexin lahaa suurta gal ahaan leheed sicirka qutul daruuriga in uu hoos u dhici lahaa halka maanta uu sara kac ba’an ay jirto .
sidaasi darteed dhamaan kalsoonida shacabka ay ku qabeen hoggaanka dalka Mohamed Abdullahi Farmaajo waaa ay baabaday waxeeyna u arkaa caqabad wayn ee ku horgudban nolosha & nabada shacabka .
Lama ogo markii uu waqtigiisa dhamaado in kursi jecelkiisa darteed dalka uu ugalo dagaalo sokeeyo taaso ayka faaideysan doonan argagaxisada alshabaab oo dowlado cadow u ah soomaaliya usoo maalgaliyeen kuna laayan shacabka.
Tallada maseegi doonta marka ugu danbeeyo Mohamed Abdullahi Farmaajo.